निषेधाज्ञा खुकुलो भयेता पनि,अझै निषेधित क्षेत्र के के हुन? | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार निषेधाज्ञा खुकुलो भयेता पनि,अझै निषेधित क्षेत्र के के हुन?
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आजदेखि अल्लि खुकुलो पारिएको छ।तर निषेधाज्ञा अझै कायमै छ।
निषेधाज्ञा कायमै भएपनि केही प्रावधानलाई असार ७ गतेसम्म खुकुलो बनाइएको हो । आजदेखि तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न पसल, दूध डेरी, मासु, ग्यास पसलहरु, किराना पसल बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । यसअघि बिहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने व्यवस्था थियो ।
यसपटक भने केहि क्षेत्रलाई खुकुलो पारिएको छ । जसमा पुस्तक पसल, हार्डवेयर पसल, अनलाइन डेलिभरी र होटेल रेष्टुरेष्टहरुले टेकअवे सेवा गर्न दिने भएको छ । पहिले खाद्यान्न पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्रै खोल्न दिइन्थ्यो भने अहिले खाद्यान्नका पसल पनि बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने छ ।
सवारीसाधन मर्मत गर्ने वर्कसप बेलुका ९ बजेसम्म नै खोल्न पाइनेछ । सहकारी संस्थालाई समेत सञ्चालन गर्न दिइनेछ । औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य वस्तु र अत्यावश्यक सेवा लिन सर्वधारणलाई मास्क लगाएर हिँड्न दिइनेछ । सभा सम्मेलन, व्यवसाय तथा नित्य पूजा, शैक्षिक संस्थाहरु, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्‍चालनमा रोक लगाउने निर्णय यथावत् राखिएको छ ।
Previous articleचियाबाट स्वास्थ्यमा फाइदा के छ ? चिया बाट यस्तो रोग पनि कम हुन सक्छ,जन्नुहोस
Next articleहामीलाई हाई किन आउँछ वा काढ्छौ? के निन्द्रा लागेर हो त कि होइन? जन्नुहोस